ပရိသတ်တွေ သို့သောသို့သောဖြစ်နေကြတဲ့ ခေးဆက်သွင်နဲ့ ဘုန်းမင်းနေလတို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေ
ခေးဆက်သွင်နဲ့ ဘုန်းမင်းနေလတို့နှစ်ယောက်အတူတူ နာရီကြော်ငြာလေးရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီး ရိုက်ကွင်းပေါ်က ပုံရိပ်လေးတွေကို ခေးတစ်ယောက် ခပ်နောက်နောက်စာသားလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ သို့သော သို့သောဖြစ်အောင် ရေးထားပုံလေးကချစ်စရာပါ။ သူမကိုလည်း ပန်းစည်းတွေ ဆက်တိုက်ပို့နေသူတစ်ယောက်ရှိနေပြီး ဒီလူဟာဘယ်သူဆိုတာကို သူမကိုယ်တိုင်ရော ပရိသတ်တွေရော မသိသေးပါဘူး။ လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုပဲ အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပြီး အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ရပ်တည်နေကာ သူမကိုချစ်ခင်အားပေးသူတွေလည်း အများအပြားရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းထက်က ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ နှစ်ယောက်သားက အပြတ်အသတ် Ro နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံရိပ်လေးတွေကို ” မအားလပ်တဲ့ကြားထဲက ခေးအတွက်အချိန်လေးတစ်ချို့ သူပေးတယ် အနားမှာရှိမနေပေမယ့်လည်း သတိတရနဲ့ အမြဲလိုလို messageလေးတွေ သူပို့တယ် ခေးကြိုက်တဲ့ အရာတွေလည်း မပြောပြဘဲ သူ့အလိုလိုသိနေတတ်ပြန်သေးတဲ့ လူလည်လေး ခုလည်းခေးသဘောကျရတဲ့နာရီလေး သူလက်ဆောင်ပေးတယ် Thank …
ပရဟိတလုပ်ငန်းများနှင့် ဘုန်ကြီးကျောင်းဆောက်တဲ့နေရာများမှာ လှူဒါန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ သိန်း၁၅၀၀၀ဆုရှင်မိသားစု
ပရဟိတလုပ်ငန်းများနှင့် ဘုန်ကြီးကျောင်းဆောက်တဲ့နေရာများမှာ လှူဒါန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ သိန်း၁၅၀၀၀ဆုရှင်မိသားစု ၁၂ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဆင်နှစ်ကောင်ကျေးရွာက ကိုဇော်မင်းထွန်းနဲ့ ဆရာမ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံက ကံထူးခဲ့ပါတယ်။ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ဠ ၈၅၇၅၂၀ နံပါတ်နဲ့ ကံထူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထီထိုးတိုင်း ၁ လုံးမှ မတူလို့ ၈ လလောက် မထိုးဘဲနေခဲ့ပြီး အိမ်လာရောင်းတာနဲ့ ထီ ၃ စောင်တွဲ ၃ တွဲကို ပြန်ထိုးခဲ့ချိန်မှာ သိန်း ၁ သောင်းခွဲဆုကို ကံထူးခဲ့တာလို့ ကိုဇော်မင်းထွန်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ “ထီက ထိုးတိုင်း တွက်တောင်မရဘူး၊ တလုံးမှကို မတူတာ၊ အဲ့တော့ မထိုးဖြစ်ခဲ့တာ …
သူတင်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Postအောက်မှာ ရိုင်းစိုင်းစွာ လာပြောတာကို ပညာရှိရှိချေပလိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
ဂီတလောမှာ တစ်ချိန်က အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေက ယခုဆိုရင် အနုပညာလောကထဲကို ပြန်လည်ရောက် လာပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် အံ့အားသင့်စရာကောင်းအောင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Single Motherအဖြစ် ဝေဖန်မှုတွေကြားမှာ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ ရှင်သန်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှာတော့ သီချင်းအသစ်တွေကိုဖန်တီးရင်း သမီးလေးနဲ့ အတူ တည်ငြိမ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အေသင်ရဲ့ ဘဝ‌လေးကတော့ တည်ငြိမ်နေပေမယ့်လည်း ဝေဖန်ချင်သူတွေက ကြံဖန်အပြစ်ရှာကြပါတယ်။ လက်ရှိ ပြည်သူလူထုကြားမှာစိုးရိမ်ဖွယ် တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် နေရာတိုင်းမှာ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန့်နေတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အေသင်ကလည်း တရုတ်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာသူပြည်သားတွေအတွက် ကိုယ်ချင်းစာပြီး post တစ်ခုတင်ခဲ့ပေမယ့် ရိုင်းစိုင်းစွာ Comment …
အေးချမ်းတဲ့သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မေပန်းချီ
ပရိသတ်အချစ်တော်လေး မေပန်းချီကတော့ အေးချမ်းတဲ့သာသနာ့ဘောင်ကို ခေတ္တဝင်ရောက် သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသမီးတော် အဖြစ်နဲ့ တရားတော်တွေကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ဆရာလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကလည်း ကြည့်သူတိုင်းကို ထပ်တူအေးချမ်းသွားစေမှာ ပါ။ သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် ဆံပါယ်ချိန်မှာတော့ စကားလုံးတွေနဲ့ဖော်မပြနိုင်တဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့ကြောင့် မျက်ရည်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒီခံစားချက်ကို သာသနာ့ဘောင်ဝင်ဖူးသူတွေသာသိရှိမှာဖြစ်ပြီး စကားလုံးနဲ့ဖော်ပြလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ကြည်နူးဝမ်းသာဝမ်းနည်း ခံစားချက် တွေတပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အနုပညာအလုပ်တွေကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သူမကိုချစ်ခင် အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ လည်း အခိုင်အမာရှိခဲ့ပါတယ်။ လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ အနုပညာသက်တမ်းဟာလည်း ကြာမြင့်လာခဲ့ပါပြီ။ ဆံချချိန်မှာဆရာလေးတွေရဲ့ရွတ်ဖတ်သံဟာ မျက်ရည်မထိန်းနိုင်လောက်အောင်ကို ခံစားချက်ပြင်း တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ အနုပညာရှင်ဖြစ် လို့ အလှအပကိုတန်ဖိုးထားနေကြတဲ့အချိန်မှာ အလှအတွက် ဂရုမစိုက်ပဲ ဘဝအတွက် သံသရာအတွက်ကောင်းအောင် သာသနာ့ဘောင် …
ညအိပ်မပျော်သူတိုင်း ရောဂါဖြစ်နေသူပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မပျော်လျှင် ၁။ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်စားပါ။ အိပ်စက်ခြင်းတွက် အထူးကောင်းမွန်ပြီး အားရှိသည်။ ၂။နွားနို့သောက်ခြင်းက အရိုးအဆစ်သန်မာသည့်အပြင် အိပ်စက်ခြင်းကို မြန်ဆန်စေပါသည်။ ၃။ကြက်သွန်ဖြူခေါင်းအုံးအောက် ၃တက်ထားအိပ်ပါ။ ဦးနှောက်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အိပ်စက်မှုကို မြန်ဆန်စေသည်။ ၄။ကြက်သွန်နီထက်ခြက်ခွဲပီး ခြေဖဝါအလည်တည့်တည့် ကပ်ပါ။ တစ်ကိုယ်လုံးမှ အဆိပ်အတောက်များကို စုပ်ယူပါလိမ့်မယ်။ အအေးမိနာစေးသူ ကလေး လူကြီးမရွေး လုပ်ပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေပါမည်။ Credit-ဆေးမြီးတို (Unicode) ညအိပ်မပျော်သူတိုင်း ရောဂါဖြစ်နေသူပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မပျော်လျှင် ၁။ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်စားပါ။ အိပ်စက်ခြင်းတွက် အထူးကောင်းမွန်ပြီး အားရှိသည်။ ၂။နွားနို့သောက်ခြင်းက အရိုးအဆစ်သန်မာသည့်အပြင် အိပ်စက်ခြင်းကို မြန်ဆန်စေပါသည်။ ၃။ကြက်သွန်ဖြူခေါင်းအုံးအောက် ၃တက်ထားအိပ်ပါ။ ဦးနှောက်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အိပ်စက်မှုကို …
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ် လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို မျှဝေလိုက်ပါ
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ရရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ရရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ရရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ရရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. Credit မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ် လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို မျှဝေလိုက်ပါ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး …
အလှူညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ …
အလှူညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ … အလှူ ညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှာ သွားလိုက်သောအခါ… အလှူမှာ ညတရားပွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း မဏ္ဍပ်ရှေ့ထွက်ထိုင်နေမိချိန်လေး….. ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကျွန်တော့်က ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှပဲ ဆော့နေကြတာမဟုတ်ဘူးဗျ …။ ဘုန်းကြီးကားကို သူတို့အင်္ကျီလေးနဲ့ ဖုန်တွေသုတ်ပေးနေတာပဲ …။ ခုအချိန်မှာ လူကြီးတွေဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်တွေပဲရှိနေကြပါစေ …။ နောင်တစ်ချိန်လူကြီးဖြစ်လာကြမဲ့ ကျွန်တော့်တို့ရွာက ကလေးလေးတွေရဲ့ ခုလိုစိတ်ဓါတ်လေးတွေတွေ့ရ‌ပြန်တော့လဲ ကြည်နူးမိရ ပြန်ပါတယ် …။ ကလေးလေးတွေရဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ ခုလိုလေးဖြစ်ပေါ်လာရတာကလဲ ကျွန်တော်တို့ရွာလေးမှာရှိတဲ့ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်းလေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးပါနိုင်ပါလားလို့ စဉ်းစားမိရင်း …။ ။ Kyaw …
This Year : 147112
Total Users : 442245
Total views : 1700551